LibreOffice राइटरका लागि सर्टकट कुञ्जीहरू
सर्टकट कुञ्जीहरू LibreOffice राइटरका लागि
साधारण कार्यहरू छरितो साथ गर्नका लागि तपाईँ सर्टकट कुञ्जीहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ LibreOffice. यो सेक्सनले पूर्वनिर्धारित सर्टकट कुञ्जीहरू सूची गर्दछ LibreOffice राइटरका लागि.
तपाईँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ साधारण सर्टकट कुञ्जीहरू LibreOffice.
कार्य कुञ्जीहरू LibreOffice राइटरका लागि
स्वत:पाठ पूरा गर्नुहोस्
स्वत:पाठ सम्पादन गर्नुहोस्
अर्को फ्रेम चयन गर्नुहोस्
डेटा स्रोत दृश्य खोल्नुहोस्
नेभिगेटर खुला छ, पृष्ठ सङ्ख्यामा जानुहोस्
फाँट सेडिङ खुला / बन्द
फाँटहरू अद्यावधिक गर्नुहोस्
तालिका हिसाब गर्नुहोस्
आगत फाँटहरू र आगत सूचीहरू अद्यावधिक गर्नुहोस्
मुद्रण नगरेको क्यारेक्टरहरू खुला/बन्द
शैली सिर्जना गर्नुहोस्
शैली अद्यावधिक गर्नुहोस्
तलिका घुसाउनुहोस् वा सम्पादन गर्नुहोस्
क्रमाङ्कन / गोलीहरू बन्द
सबै चयन गर्नुहोस्
खोज्नुहोस् र बदल्नुहोस्
अन्तिम कार्य फेरि गर्नुहोस्
आदेश Ctrl+0 (शून्य)
शीर्षक १ अनुच्छेद शैली लागू गर्नुहोस्
शीर्षक २ अनुच्छेद शैली लागू गर्नुहोस्
शीर्षक ३ अनुच्छेद शैली लागू गर्नुहोस्
चयन गरिएको पाठ हिसाब गर्नुहोस् र परिणाम क्लिपबोर्डमा प्रतिलिपि बनाउनुहोस्
आदेश Ctrl+Shift+minus sign (-)
आदेश Ctrl+गुणन चिन्ह * (सङ्ख्या प्याडमा मात्र)
म्याक्रो फाँट सञ्चालन गर्नुहोस्
बिच्छेद नभएको खाली स्थानहरू. बिच्छेद नभएको खाली स्थानहरू हाइफनेसनका लागि प्रयोग हुँदैन र यदि पाठ परिभाषित भयो भने विस्तारित हुँदैन.
अनुच्छेद परिवर्तन बिना पङ्क्ति बिच्छेद
म्यानुअल पृष्ठ बिच्छेद
multicolumnar पाठहरूमा स्तम्भ बिच्छेद
विकल्प Alt+प्रविष्ट गर्नुहोस्
कर्सर बायाँ लैजानुहोस्
बायाँ सँगको चयनमा कर्सर लैजानुहोस्
विकल्प Alt+बाँण कुञ्जीहरू
शब्दको सुरुमा जानुहोस्
विकल्प Alt+Shift+Arrow Keys
शब्द बाट शब्द बायाँमा चयन गरिँदै
दायाँमा कर्सर लैजानुहोस्
दायाँको चयन सँग कर्सर लैजानुहोस्
शब्दको अन्त्यमा जानुहोस्
शब्द बाट शब्द दायाँमा चयन गरिँदै
माथि एक पङ्क्ति लैजानुहोस्
माथिल्लो दिशामा पङ्क्तिहरू चयन गरिँदै
तल एक पङ्क्तिमा कर्सर लैजानुहोस्
पङ्क्तिहरू तल्लो दिशामा चयन गरिँदै
पङ्क्तिको सुरुमा जानुहोस्
पङ्क्तिको सुरुमा जानुहोस् र चयन गर्नुहोस्
पङ्क्तिको अन्त्यमा जानुहोस्
पङ्क्तिको अन्त्यमा जानुहोस् र चयन गर्नुहोस्
कागजातको सुरुमा जानुहोस्
कागजातको सुरुमा जानुहोस् र चयन गर्नुहोस्
कागजातको अन्त्यमा जानुहोस्
कागजातको अन्त्यको पाठमा जानुहोस् र चयन गर्नुहोस्
पाठ र हेडर बीचमा कर्सर स्विच गर्नुहोस्
पाठ र फुटर बीचमा कर्सर स्विच गर्नुहोस्
मोड घुसाउनुहोस् सुरु/बन्द
पर्दा पृष्ठ माथि
पर्दा पृष्ठ चयन सँग माथि लैजानुहोस्
पर्दा पृष्ठ तल लैजानुहोस्
पर्दा पृष्ठ चयन सँग तल लैजानुहोस्
शब्दको अन्त्यमा पाठ मेट्नुहोस्
शब्दको अगाडिको पाठ मेट्नुहोस्
बाक्यको अन्त्यमा पाठ मेट्नुहोस्
बाक्यको सुरुमा पाठ मेट्नुहोस्
आदेश Ctrl + Tab
पछिल्लो सुझाव स्वचालित शब्द कम्प्लिसन सँग
अघिल्लो सुझाव प्रयोग गर्नुहोस् स्वचालित शब्द कम्प्लिसन सँग
सूची स्रोत दायराको सामग्रीहरू परिवर्तन गर्नुहोस्
अनुच्छेद र शीर्षक स्तरहरूका लागि सर्टकट कुञ्जीहरू
कमाण्ड+बिकल्प Ctrl+Alt+Up Arrow
सक्रिय अनुच्छेद वा चयन अनुच्छेद एक अनुच्छेद माथि लैजानुहोस्.
सक्रिय अनुच्छेद वा चयन अनुच्छेद एक अनुच्छेद तल लैजानुहोस्.
शीर्षक ढाँचामा "Heading X" (X = १-९) रूपरेखाको एक स्तर तल लगियो.
शीर्षक ढाँचामा "Heading X" (X = २-१०) रूपरेखाको एक स्तर माथि लगियो.
शीर्षकको सुरुमा: ट्याब रोक्नुहोस् घुसाउनुहोस्. सञ्झ्याल ब्यवस्थापक प्रयोगमा भर पर्दोबिकल्पअल्ट +ट्याब सट्टामा प्रयोग हुन सक्छ।
किबोर्ड सँग शीर्षक स्तर परिवर्तन गर्न, पहिलो स्थान कर्सर शीर्षकको अगाडिमा.
तालिकाहरूका लागि सर्टकट कुञ्जीहरू LibreOffice राइटरमा
यदि सक्रिय कक्ष खाली छ भने: पूरा तालिका चयन गर्नुहोस्. हैन भने: सक्रिय कक्षको सामाग्रीहरू चयन गर्नुहोस्. सम्पूर्ण तालिका चयनहरू फेरि प्रेस गर्दा.
यदि सक्रिय तालिका खाली छ भने: तालिकाको सुरुमा जानुहोस्. हैन भने: पहिलो प्रेस सक्रिय कक्षमा जान्छ, दोस्रो प्रेस हालको तालिकाको सुरुमा जान्छ, तेस्रो प्रेस कागजातको सुरुमा जान्छ.
यदि सक्रिय तालिका खाली छ भने: तालिकाको अन्त्यमा जान्छ: हैन भने: पहिलो प्रेस सक्रिय कक्षको अन्त्यमा जान्छ, दोस्रो प्रेस हालको तालिकाको अन्त्यमा जान्छ, तेस्रो प्रेस कागजातको अन्त्यमा जान्छ.
ट्याब रोक्ने घुसाउदछ (तालिकाहरूमा मात्र)। सञ्झ्याल ब्यवस्थापक प्रयोगमा भर परेर,बिकल्पअल्ट+ट्याब यसमा प्रयोग हुन सक्छ।
दायाँ/बटन कक्ष कुनोमा स्तम्भ/पङ्क्तिको साइज बढाउनुहोस्/घटाउनुहोस्
बायाँ/माथि कक्ष कुनोमा स्तम्भ/पङ्क्तिको साइज बढाउनुहोस्/घटाउनुहोस्
विकल्प+आदेश Alt+Ctrl+बाँण कुञ्जीहरू
जस्तै विकल्प Alt, तर मात्र सक्रिय कक्ष मात्र परिमार्जन गरियो
विकल्प+आदेश Ctrl+Alt+Shift+Arrow Keys
सबै चयन गरिएको तालिकाहरूबाट कक्ष सुरक्षा हटाउनुहोस्. यदि कुनै तालिका चयन गरिएन भने, कागजातको सबै तालिकाहरूबाट कक्ष सुरक्षा हटाइन्छ.
यदि केही पनि चयन गरिएन भने, अर्को कक्षको सामाग्रीहरू मेटाइन्छ, यदि कक्ष चयन गरियो भने, चयनको पूरा रेखा मेटिन्छ. यदि सबै पङ्क्तिहरू पूर्ण रूपमा वा आंशिक रूपमा चयन गरियो भने, सम्पूर्ण तालिका मेटाइन्छ.
सर्टकट कुञ्जीहरू फ्रेमहरू लैजान र पूर्वाकारमा फर्काउन, ग्राफिक्स र वस्तुहरू
कर्सर पाठ फ्रेम भित्र छ र कुनै पाठ चयन गरिएको छैन: पाठ फ्रेम चयनबाट बाहिर निस्कनुहोस्.
पाठ फ्रेम चयन गरियो: पाठ फ्रेमबाट कर्सर सफा बन्द गर्नुहोस्.
F2 वा प्रविष्ट वा कुनै कुञ्जी जसले पर्दामा क्यारेक्टर बनाउँदछ
यदि पाठ फ्रेम चयन गरियो भने: पाठ फ्रेममा पाठको अन्त्यमा कर्सर लगेर राख्नुहोस्. यदि पर्दामा क्यारेक्टर आउने गरि तपाईँले कुनै कुञ्जी थिच्नु भयो भने, र कागजात सम्पादन मोडमा छ, क्यारेक्टर पाठको रूपमा निस्कन्छ.
तल्लो दायाँ कुना चलाएर पूर्वाकारमा लेराउनुहोस्.
विकल्प+आदेश Alt+Ctrl+Shift+Arrow Keys
माथि बायाँ कुना चलाएर पूर्वाकारमा लेराउनुहोस्.
वस्तुको एङ्कर चयन गर्नुहोस् (सम्पादन बिन्दुहरू शैलीमा).
कुञ्जीपाटीसँग नेभिगेट र चयन
सर्टकट कुञ्जीहरू प्रयोग गर्दा (LibreOffice राइटर पहुँचता)
सर्टकटहरू (LibreOffice पहुँचता)
Title is: %PRODUCTNAME राइटरका लागि सर्टकट कुञ्जीहरू